Kusungulwa Kanjani Isikweletu Sokubambisana - Isikweletu Sebhizinisi Lokwakha
Igayidi ebanzi yesikweletu sebhizinisi, ukusungula iphrofayili yesikweletu sebhizinisi nokuthola imigqa yesikweletu kubabolekisi Ukuthenga ngesikweletu sebhizinisi akulula ukukwenza ngokwakho, kepha ngosizo oluncane ungaba nesikweletu sebhizinisi ngokushesha kunalokho owawucabanga. Kunezinto ezimbalwa zokugwema kanye nezinto eziningi ezibalulekile ezingenakushaywa indiva. Sikuthatha ngesandla futhi sikuqondise kule nqubo eyinkimbinkimbi.
Ukulungiselela Inqubo Yokwakha Izikweletu Ezezimali
Sibhala phansi inqubo yokusungula iphrofayili yesikweletu sebhizinisi, yonke indlela eya kwimalimboleko evulekile yasebhange, amakhadi wesikweletu amaningi ebhizinisi kanye nemigqa eminingana yezikweletu nabathengisi. Konke lokhu kuqala ngokubeka isisekelo sokwakha iphrofayili yakho yesikweletu nenqubo yokufaka isicelo nababolekisi, ngokwenza inkuthalo yakho efanele. Kufanele uqinisekise ukuthi ibhizinisi lakho lilungele inqubo yokwakhiwa kwesikweletu - uma uqala ngaphandle kokwenza le misebenzi, ubeka engcupheni yokuthi uqale phansi noma kubi kakhulu, uvuleke umake isikweletu / ubungozi obukhulu yizinkampani ezibikayo. Kubalulekile ukuqonda nokuqedela lezi zinyathelo ukwakha iphrofayili yesikweletu sebhizinisi lakho.
Isinyathelo 1 - Igama Lokusesha Ngegama Lesikweletu noDunn noBradstreet
Ngokufuna i-D&B yamagama webhizinisi, ungathola ngokushesha ukuthi ibhizinisi elinegama elifanayo linomlando wesikweletu. Ngokusebenzisa usesho oluthuthukile, ungabuza imininingwane yedatha ye-D&B ezingeni likazwelonke. Kungani ukusesha uDunn noBradstreet kubalulekile? Uma ungaqedela inqubo yokwakhiwa kwesikweletu sebhizinisi bese kamuva uthola ukuthi inkampani enegama elifanayo (mhlawumbe elisesimweni ehlukile) ibinephrofayli lesikweletu enomlando wesikweletu ompofu noma omkhulu wokuzibeka ethubeni, ungazithola kufanele unqobe lokho lapho igama lenkampani liyaseshwa.
I-D & B Igama Lokusesha Igama
Uma usuqinisekisile ukuthi igama lakho lebhizinisi lihlukile ne-D&B, ungaqhubeka nenqubo yokwakha iphrofayili yesikweletu. Uma ngabe uthola inkampani enegama elifanayo, ungacabanga ngokuchibiyela amarekhodi enkampani yakho ukuze wakhe isikweletu ngaphansi kwegama lebhizinisi elingasebenzi vele.
Isinyathelo 2 - Ukucinga Ukutholakala Kwegama Lamagama
Isinyathelo esilandelayo ukubheka igama lebhizinisi lakho kuzo zonke izinto ezibhalisiwe esizweni. Ungakwenza lokhu ngokuya kuNobhala Wezwe ngamunye noma ehhovisi leKhomishini, iwebhusayithi noma isikhungo sezingcingo ubheke ukutholakala kwamagama, noma ungasebenzisa ithuluzi eliku-inthanethi. Kunamathuluzi okusesha atholakalayo wamarekhodi wesikweletu nawezimali kanye nezinhlangano zebhizinisi ezibhalisiwe. Lokhu kusesha okulula kuzokwazisa uma kunelinye ibhizinisi elibhalisiwe elisebenzisa igama elifanayo kwelinye izwe.
Ukusesha kufanele kwenziwe ngaphandle kokokuhlonza okuyinkampani, okusho igama lebhizinisi ngaphandle kwe- "Inc", "LLC", "Kunqunyelwe", "Corp", njll. Ngalolu cwaningo, uzothola inkampani yakho ibekwe ohlwini futhi ungabuka imininingwane yamarekhodi omphakathi, kufana nokuthi lapho kwakhiwa ibhizinisi, uhlobo namakheli ebhizinisi abhalisiwe.
Isinyathelo 3 - Ukuhlola ukwephulwa kophawu lwentengiso
Uzofuna nokubheka i-Trademark Electronic Search System (TES) database ukuthola ukufana kwegama lakho lebhizinisi. Lolu hlobo lombuzo ngokuvamile luzokhombisa imiphumela eminingi. Lokhu okufaka kwifomu kuncitshisiwe futhi kuncishiselwe umdlalo obanzi. Isibonelo, uma usesha "Ibhizinisi Lesikweletu", uzobona imiphumela efana ne- "CU BIZSOURCE" engenayo 'isikweletu sebhizinisi' egameni noma incazelo yezimpahla nezinsizakalo, noma kunjalo 'ibhizinisi' kanye 'nesikweletu' kukhona, okuzokhipha umphumela, noma ngaphandle komdlalo oqondile.
I-Trademark Electronic Search System (TESS)
Izimpawu zentengiso zizobhaliswa futhi zingaba ze-LIVE noma ze-DEAD, kuleli cala, ufuna ukubheka izimpawu zokuthengisa bukhoma ngomdlalo oqondile wegama lebhizinisi lakho ukuze uqinisekise ukuthi akukho kungqubuzana. Okunye ukucatshangelwa ukuthi uphawu lwentengiso lubekelwe imikhakha, ngakho-ke ungaba nophawu lwamagama olubhaliselwe imboni yakho noma umkhakha futhi elinye ibhizinisi lingabhalisa ukulandelana kwamagama afanayo kwesinye isigaba kwezinye izinhloso.
Isinyathelo 4 - Domain Name Search, ikheli leWebhusayithi
Kufanele ubhalise igama lenkampani yakho njengesizinda, mhlawumbe ngokunwetshwa kwe- “.com”. Bheka noma yimuphi umhlinzeki werejista wesizinda ukuthola ukutholakala kwegama lesizinda. Igama lesizinda sakho kungenzeka noma lingafaki isikhombi sakho sebhizinisi. Okusho ukuthi uma igama lenkampani yakho “Abaphathi Abakhulu Be projekthi, u-Corp” uzofuna ukubhalisa ku- “www.bestprojectmanagercorp.com” noma ngenye indlela i- “www.bestprojectmanager.com” ngale njongo.
I-Regital.com Isheke Ukutholakala Kwesizinda
Lokhu akudingeki ukuthi kube igama lesizinda eliyinhloko elisebenziselwa inkampani yakho yebhizinisi. Ukulandela isibonelo esingenhla, kungenzeka ukuthi usebenzisa elinye igama lesizinda, noma kunjalo kubalulekile ukuthi igama ozokwakha ngalo isikweletu libhaliswe kuwe.
Isinyathelo 5 - Ukufakwa ohlwini kweSikhwama Sama Superpages
Qiniseka ukuthi unohlu lwebhizinisi ohlwini lwemibhalo lwebhizinisi leSupppages. Uma ungakwenzi, ungakha eyodwa mahhala. Lokhu kuthatha imizuzu nje futhi akubizi lutho. Ungadala i-akhawunti bese wengeza ibhizinisi lakho kumkhombandlela ngokulandela isixhumanisi esingezansi. Uma uthola ibhizinisi lakho, hlola ukuqinisekisa ukuthi ulwazi luvuselelwa ngemininingwane yakho yamanje yokuxhumana nemininingwane yendawo.
Ukuphathwa kohlu LwamaSpanishp
Kunezinketho eziningi zebhizinisi lakho ukuthi zifakwe kuhlu, ngale njongo, ukumane kube negama lebhizinisi lakho kusikhombisi imininingwane yakho yamanje yokuxhumana kwanele.
Igama Isixazululo Sokuxabana
Uma igama lebhizinisi lakho lingqubuzana nanoma yikuphi ukuhlolwa okungenhla, kufanele ucabangele ukulishintsha. Kunezinketho eziningi ongazifinyelela, ezivela kuma-DBA, izindatshana zokuchibiyela kanye nokufaka ibhizinisi elisha. Ungashayela i-1-800-Company bese ucela umthengisi ozokuthengisa ukuthi akusize ngegama elisha lebhizinisi. Ngaphambi kokuqeda ushintsho lwegama lebhizinisi noma ukubhalisa ibhizinisi elisha, kufanele ugcwalise izinyathelo ezingenhla uqinisekisa ukuthi ungakha ngokuphepha iphrofayili yesikweletu sebhizinisi nalo.
Qhubekela Esinyathelo Esilandelayo >> Izikweletu Zokwakha Zokwakha - Izinhlobo Zokuxoxa zebhizinisi >>